‘मिस लिटिल नेवाः’ मा २५ किशोरी भिड्दै - Nepaliraibar
‘मिस लिटिल नेवाः’ मा २५ किशोरी भिड्दै
काठमाडौं । ‘मिस लिटिल नेवाः’मा २५ किशोरी भिड्ने भएका छन् । भक्तपुर र काठमाडौंका विभिन्न २० स्कुलबाट अन्तिम स्पर्धाका लागि यी प्रतियोगी छानिएका हुन् । नेवार समुदायका किशोरीहरुलाई आफ्नो धर्म, कला, संस्कृति र संस्कारबारे ज्ञान दिने उद्देश्यले नेप्लीज फेसन होमले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षदेखि हुन नसकेको प्रतियोगिताको १३औं संस्करण आगामी कात्तिक ६ गते आयोजना हुन लागेको नेप्लिज फेसन होमकी अध्यक्ष हेमा मानन्धरले बताइन् । नेवारी कला, संस्कृति, धर्म र संस्कारबारे जानकारी दिने उदेश्यले प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएको हो ।
प्रतियोगितामा ‘लिटिल मिस नेवाः’ की ‘फस्ट रनरअप’ प्रियंका तण्डुकार, ‘बेस्ट पर्सनालिटी’ पल्पसा श्रेष्ठ र ‘चार्मिङ पर्सनालिटी’ प्रजिता श्रेष्ठको कोरियोग्राफी हुनेछ । त्यस्तै ‘मिस नेवाः’ सुनिता डंगोल र नीतु डंगोलले नेवारी भाषाको प्रशिक्षण दिनेछन् ।
को हुन् ‘इन्डियन आइडल–१२’ का विजेता पवनदीप राजन ?
५१ वर्षको उमेरमा जेनिफरको बोल्ड अवतार, सामाजिक सञ्जालमा सनसनी
‘ब्ल्याक व्युटी’माेडल एलिसा शर्मासंग आशुतोषको लफडा, अब के गर्लान् ?
टिकटक बनाउछु भन्दै सुनको सिक्री लिएर फिर्ता नदिएपछि…
अनन्तको सर्ट फिल्म ‘अटुट प्रेम’ सार्वजनिक